मर्मत सम्झौता शुल्क के हो? - सजिलो बहु प्रदर्शन
मर्मत सम्झौता शुल्क के हो?
सिर्जना गरिएको फरवरी 26, 2020
Frequently. प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
सफ्टवेयर मर्मत सम्भार भनेको के हो?
सफ्टवेयर मर्मत सम्बन्धी सम्झौता सफ्टवेयर उद्योगमा भेटिने साझा सम्झौता हो। यो ग्राहक र सफ्टवेयर कम्पनी बीच सम्झौता हो जुन दुबै छेउमा सफ्टवेयरको निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित गर्दछ। यसको मतलब सफ्टवेयर प्रदायकले सफ्टवेयर कायम राख्न र अद्यावधिक गर्न सहमत भैरहेको छ ताकि यो प्रभावकारी ढ operate्गले सञ्चालन गर्न जारी रहन्छ र यो प्राविधिक प्रगति र सुरक्षा चिन्ताको साथ अप टु डेट छ। ग्राहकको रूपमा तपाईले मर्मतसम्बन्ध सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईले ती अपडेटहरू चाँडै रिलिज हुनेबित्तिकै तिनिहरूको पहुँच पाउनुहुनेछ।
उदाहरण को लागी, तपाईको कार लाई हरेक बर्ष सेवा चाहिन्छ, सायद तेल परिवर्तन वा टायर पign्क्तिबद्धता। सफ्टवेयरलाई पनि इष्टतम प्रदर्शन निश्चित गर्न समान फिक्सहरू आवश्यक पर्दछ, किनकि टेक्नोलोजीको विश्व द्रुत रूपमा परिवर्तन हुन्छ।
EMD को मर्मत सम्बन्धी के हो?
हामी प्रत्येक ग्राहकलाई इजि मल्टि डिस्प्लेको मर्मत सम्बन्धी सम्झौतामा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्दछौं। यदि तपाइँ अप्ट इन गर्न रोज्नुहुन्छ भने, तपाइँलाइ वार्षिक आधारमा सफ्टवेयर लागतको २०% को फ्ल्याट दर शुल्क लाग्नेछ।
रोजाईले तपाईंलाई केही थप फाइदा दिन्छ:
निश्चय गर्नुहोस् कि टेक्नोलोजी प्रगतिको रूपमा, ईएमडी सफ्टवेयरले पनि गर्दछ।
जब अन्य ग्राहकहरूले EMD मा अनुकूलन अनुरोध गर्दछन्, तपाईं पनि यी थपिएका सुविधाहरूमा पहुँच पाउनुहुनेछ, जस्तै नयाँ डेटा प्रकार जडानहरू।
के गर्ने यदि मैले मर्मत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेन भने?
समस्या छैन! तपाईं सजिलो मल्टि डिस्प्ले प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईंको वर्तमान संस्करणको रूपमा कार्य जारी रहनेछ। यद्यपि तपाईले थप सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुने छैन जुन बर्षभर सफ्टवेयरमा विकास वा थप्न सकिन्छ। त्यस्ता सुविधाहरू तपाईंको प्रदर्शनका लागि विभिन्न प्रकारका डाटा स्रोतहरू प्रयोग गर्ने क्षमता हुन सक्छ।
यी सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न तपाईंले सफ्टवेयर अपग्रेड शुल्क तिर्नु पर्छ जुन तपाईले बर्ष भरि तिर्ने मर्मत २०% भन्दा बढी हुन सक्छ।
भगवान रामको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल प्रदर्शन न्यू योर्क टाइम्स स्क्वायरमा चम्किन्छ
एलईडी टेक्नोलोजी किन इनडोर डिजिटल साइनेजको भविष्य हो?
डिजिटल साइनेजको भविष्यलाई आकार दिँदै